DAAWO SAWIRRADA: Haweenney Ka Socota Shirkadda Dp World Oo Kulamo Qarsoodi Ah La Daahay La Yeellatay Qeybaha Bulshada Ee Berbera | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM DAAWO SAWIRRADA: Haweenney Ka Socota Shirkadda Dp World Oo Kulamo Qarsoodi Ah La Daahay La Yeellatay Qeybaha Bulshada Ee Berbera
July 13, 2016 - Written by admin
Berbera (Hubaal)- Mas’uuliyiinta Golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa magaallada Berbera ku soo dhaweeyey Haweennay ka socota Shirkadda Imaaraatiga ah ee Xukuumadda Somaliland heshiiska maalgelinta Dekedda Berbera la saxeexatay ee DP World.
Haweennaydan oo Magaceeda la yidhaahdo Marwo Hibo Maxamed Cabdillaahi oo dhawrkii maalmood ee u dembeeyey ku sugnay magaallada Berbera ayaa shirkadda Dubai Port World u qaabisaln arrimaha horumarinta bulshada, waxaana intii ay ku sugnayd magaallada Berbera ay kulamo kala duwan la qaadatay qaybaha bulshada, gaar ahaanna bulshada rayidka. Marwo Hibo oo ay weheliyaan xubno kamid ah xildhibaannada golaha deegaanka degmadaas iyo maamulka gobolka ayaa intii ay ku gudo jireeen kormeerkooda, waxaa wehelinayay ilaallo ka tirsan ciidammada ammaanka, kuwaas oo aad u sugay ammaanka sarkaalladdan iyo madaxda kale ee la socotay. Mar Ay warbaahinta kula hadashay magaaladda Berbera waxaa ay sheegtay in ay shirkadda D.P. World U Qaabilsan tahay waaxda (Adminstration And Human Recourses) oo ay madax ka tahay. Waxaanay sheegtay in ay ujeedada socdaalkeedu daaran yahay xog ogaal u noqoshada ra’yul-camka bulshada gobolku ka taagan yihiin heshiiskan, maadaama oo ay xaallada taban oo xasillooni darro ahi kasoo yeedhayaan magaallada Berbera.
Haweennaydani waxaa ay ku dooday in inta ay kormeerkeeda ku gudo jirto ay u qorsheysan tahay in ay la kulanto cid kasta oo ku lug leh arrimaha dekedda iyo ka sokow dawladda dhinacyada kale ee ay arrintani saamaynta ku yeellanayso.
Waxaa ay sheegtay Madaxa waaxda Maamulka iyo wax soo saarka bulshada ee DP World in ay illaa hadda kulamo la yeelatay ururrada bulshada rayidka qaarkood, xarumaha caafimaadka, waxbarshada iyo kuwo kale. Waxaanay hoosta ka xariiqday in ay masuuliyiinta maamula kulamadaasi ay kala hadashay baahiyaha ay shirkadadoodu wax ka qabato ka sokow arrinta dekedda, waxaanay u ballan qaaday in ay wax kala qaban wixii daruuriyaad ah ee kellifaya iska caabinta.
Ka sokow kulamadan, waxaa soo jiray kulmo kale oo qarsoodi ahaa oo ay maamulka golaha deegaanku kaalin firfircoon ka qaateen, kuwaas oo ay haweennaydani la yeelatay cidda taladu ka go’do ee saamaynta ku leh mawqifka diidmada ah ee lagu mucaridayo heshiiskan, waxaana sida ay degellada wararka ee internet-ka qoreen ay kulamadaasi u badnaayeen beer-laxawsi lagu maslaxayo bulshada. Sidoo kale waxa ay Hibo Maxamed Cabdillahi Booqasho ku tagtay degmooyinka sheekh iyo mandheera oo iyagana kula kulantay dadka degmooyinka ku dhaqan waxaana ay u balan qaaday inay wax kala qaban doonaan shirkad ahaan wixii ay baahi usheegteen.
Sida ay degelladu wararku qorayaan natiijada socdaalkan ayaa la weriyey in marka ay dhamaysato haweennayadi warbixin ku celinayso maaamulka shirkaddeeda si ay uga go’aan qaataan.